Car Car mapụtara Parts, Ford Ranger Oil mgbapụta, Shock Absorbers Maka ire ere - Nitoyo
Mmanụ ụgbọala mgbapụta Assy
Ikuku Suspension Strut
Ihe dị iche
Ebe ọ bụ na
Na-arụkọ ọrụ na ndị ọzọ
karịa mba 180 na mpaghara
Na-eje ozi ọzọ
Karịa ndị ahịa 400
Multi-ọwa elekọta mmadụ na netwọk
Ihe ngosi ntanetị na nke ụwa kwa afọ
Uzo zuru oke nke ihe ndi ozo
Ndị otu ọkachamara ọkachamara
Afọ 21 nke ahụmahụ na nka
Ọrụ ahịa na-azụ ahịa na ndụmọdụ ịre ahịa amamihe
Companylọ ọrụ anyị bụ otu n'ime akụkụ ndị ama ama na-ebubata ngwa ngwa, ndị nrụpụta na Sichuan, China. Anyị na-enye zuru àmà nke akụkụ ahụ mapụtara ebe ọ bụ na 2000, mee ka ego gị dị mma, na iji jide n'aka.
Ihe kachasị anyị mkpa bụ akụkụ akpaaka / ngwa maka ụgbọ ala, Pick-up, Van, Bus, Ọrụ Dị Ukwuu, Light Light, Forklift, wdg; site na Japanese, Korea, American, European na ụgbọ ala ndị China. A na-ebupụ ngwaahịa ndị a na Latin America, North America, South East Asia, South Asia, Middle East, Africa, East and South Europe, Russia, wdg. ọnụahịa!
Nitoyo bụ ebe nkwụsị ahịa gị maka ebe akụkụ akpaaka gị niile chọrọ! Ka anyị tolite ọnụ, NITOYO – anaghị ahapụ gị!
Na 2000, anyị tọrọ ntọala otu malitere na akpaaka akụkụ mbupụ azụmahịa na ọtụtụ gbara akwụkwọ nleta na nchoputa nke fọrọ nke nta dum ụlọ mmepụta ihe na nke China, na-ahụ kwesịrị ekwesị ụlọ mmepụta ihe.
2000-2005 Mgbasawanye Na Azu South America Market
Mgbe ọtụtụ mgbalị na mgbanwe anyị jisiri ike nweta ntụkwasị obi nke ndị ahịa na South America ahịa ọkachasị na Paraguay.
Anyị nwere ndị ahịa dị oke egwu ma nwee nnukwu ọrụ na ngalaba na-ahụ maka ịzụrụ ihe na ịhazi njikwa, na-enye ọrụ dị mma maka ndị na-azụ ahịa gburugburu ụwa.
Ọrụ nke ndị ahịa anyị na ngalaba ịzụta na-ekewa site na sistemụ nke ụgbọ ala ahụ, ndị isi nọ na ya niile nwere ahụmịhe afọ 3 ka ị wee ghara ichegbu onwe gị maka ọpụrụiche nke ọrụ na ngwaahịa anyị.
E wezụga nke ahụ, a họpụtara ndị otu ngalaba njikwa anyị site na ọrụ ha bara uru, yana ọpụrụiche iji jide n'aka na ebubatara gị ngwongwo na oge kwesịrị ekwesị yana akwụkwọ ndị achọrọ dị ka FORM-F, EGYP EMBASSY CERTIFICATE, COC na Kenya wdg.
Ngalaba netwọk anyị ga-elekwasị anya na mmelite nke ngwaahịa anyị na nkwalite anyị, yabụ jide n'aka na ị sorola anyị na Facebook na LinkedIn.
Karịsịa ọkachamara anyị niile na-ekpuchi usoro nnweta niile nke na-eme ka ịmekọrịta mmeri-mmeri.
NITOYO anọwo na akụkụ akpaaka azụmahịa dị iche iche kemgbe 2000, anyị anakọtara akụ na ụba nke ụlọ mmepụta ihe na ahụmịhe ahịa na-emepe emepe nke nwere ike inyere ndị ahịa aka itolite na ngwa ngwa.
Uzo zuru ezu
Akụrụngwa / ngwa / ngwa / maka arsgbọala / Buru ~ elu / Van / Bus / Ọrụ Dị arọ / ruckgbọala / Forklift, wdg, ndị a niile bụ maka NITOYO, yana site na ndị Japan / Korea / American / European / Chinese.
NITOYO ka obi sie ezi ngwongwo na mma ekwe nkwa.
Ngwaahịa ọ bụla nwere ndị ọrụ aka ọrụ iji hụ na ezigbo ọrụ maka ajụjụ na iwu ga-emezu. NITOYO ọnụahịa bụ asọmpi, agaghị elu karịa ụlọ ọrụ.
Origins si SICHUAN Foreign Trading GROUP, ogologo akụkọ ihe mere eme maka ebupụ na ụlọ ọrụ siri ike iji mee nchekwa ego gị.
NITOYO na-ahụ maka iwu niile anyị nwetara, na-eche echiche mgbe ịrechara ọrụ, anyị agaghị ahapụ gị!
Anyị esonyela n'ọtụtụ ihe ngosi akụkụ ụgbọ ala n'ụwa niile kwa afọ, dị ka LATIN EXPO, APPEX, LAS VEGAS, AUTOMECHANIKA DUBAI, CANTON FAIR, wdg .Ya mere, anyị na-anọ na ahịa kachasị ọhụrụ na usoro ngwaahịa, ma nye ndị ahịa ngwaahịa kachasị mma iji gboo mkpa ndị ahịa. Anyị na-agbasa liveshow na nyiwe mmekọrịta kwa izu iji gosipụta ngwaahịa anyị kachasị ọhụrụ ma soro ndị ahịa kwukọrịta.
Ikpo ọkụ MODL MOD
Jeep Ukwu Cherokee
Ogige Ram 1500
Nitoyo Nzipu Parts Power Wepụ PTO Ge ...
NITOYO High Quality Nzipu Parts Crown Wh ...
Nitoyo Car breeki caliper eji maka zuru nso ca ...
Nnukwu ụlọ nkwakọba ihe na-enye gị ọrụ nnyefe ọsọ ọsọ
Anyị Ahịa ná Mba Ọzọ
Kemgbe ihe karịrị afọ iri abụọ na otu Nitoyo anatala ọtụtụ okwu ọma banyere ngwaahịa na ọrụ anyị.
NITOYO MID-afọ nchịkọta & ARkekọrịta SE ...
29th, June Nitoyo latched a mid-summary & sharing session .Ọtụtụ ndị njikwa ngwaahịa na-ekerịta ahụmịhe ha banyere ...
IHE BERE AKW STKWỌ AKWEKWỌ
Ihe kpatara igwe eji anya igwe na-eme mkpọtụ dị egwu: 1. A naghị ete mmanụ ụgbọ mmiri ahụ, esemokwu ahụ buru ibu. 2. Lelee ike nchịkwa mmanụ ...
NITOYO Na AUTOMECHANIKA SHANGHAI
Disemba 2nd -5th, 2020 NITOYO nọ na AUTOMECHANIKA nwere ụdị dị iche iche wee zute ọtụtụ ndị agadi na ndị enyi ọhụrụ. Ọtụtụ ndị enyi bịara n'ụlọ ntu anyị a ...
NITOYO Na 128th Canton Fair
Ọktọba 15 - 24, 2020, Nitoyo gara 128th Canton Fair site na ntanetị n'ịntanetị gụgharia. N'oge a, anyị enweela oge 18 nke steam na ab ...
N'ihi na ase banyere anyị Products Ma ọ bụ Pricelist, Biko Hapụ gị Email Ka Anyị na Anyị Ga-enwe na Aka N'ime 24 Awa.
8th Ft, No 2, Tongfu Xiang, Xiyulong Street, Chengdu, Sichuan, PRChina 610015